somewhere around Uusima. Photo Nirajan Thapa
चामल महंगो नै छ । प्रति के.जी १ यूरो १९ सेन्ट पर्ने एक के.जीको पोका पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा फिनल्याण्डका विभिन्न शहरहरूमा एशियन, अफ्रिकन पसलहरू पनि विस्तार भएकाले ५ केजी देखि २० केजीसम्मका चामलका बोरा नै सुपथ मूल्यमा पाइन्छ । शाकाहारीका लागि फिनल्यान्ड राम्रो गन्तब्य हो म भन्दिनँ । मेरा शाकाहारी साथीहरु सधैं गुनासो गर्ने गर्छन – “मांशाहारी नहुनाले पैसा त झ्वाम नै भयो नी !” कुखुराको मासु निकै नै सस्तो छ । एक किलोग्राम कुखुराको मासुको मूल्य २ यूरो २० सेन्ट जति पर्छ अर्थात ने.रु २५० (१ यूरो बराबर ने.रु. ११२ को विनिमय दरमा) को हाराहारी । मितव्ययी ब्यक्तिले करिव ८० देखि १०० यूरोमा मासिक खानपिनको राम्रै बन्दोबस्त गर्न सक्छ । साथै विद्यार्थीहरुले आफ्ना कलेजमा हुने क्याफेटेरियामा विद्यार्थी छुटसहित २ यूरो ७० सेन्टमा खाना खान पाईन्छ । त्यस्तै हेलसिन्की रेल्वे स्टेशनबाट ५ मिनेटको पैदल दुरीमा रहेको यूनि क्याफेमा पनि विद्यार्थी छुटसहित खाना उपलब्ध हुन्छ । तर त्यहाँ विद्यार्थी छुट कार्ड सहित आधिकारीक परिचयपत्र पनि आवश्यक हुन्छ ।
भनिन्छ, हेलसिन्की क्षेत्र, ताम्पारे र तुर्कुबाहेक अन्य शहरहरुमा काम पाउन अत्यन्तै गार्‍हो छ । र, यसको मतलब के पनि हैन भने हेलसिन्कीमा अध्ययन गर्न आएका सबैले एकदमै सजिलै काम पाउँछन् र अन्य क्षेत्रमा बस्नेले कामै पाउँदैनन् । काम पाउनका लागि यहाँ दुईवटा माध्यमहरु छन् पहिलो श्रम मन्त्रालयको वेभपेज मोलडटफी मा प्रत्येक दिनजसो अपडेट हुने अवसर सम्बन्धी बिज्ञापन हेर्ने र त्यहाँ रहेका विभिन्न कम्पनीका आवश्यकता सम्बन्धी फर्महरु भर्ने । अझ प्रभावकारी चाँहि त्यहाँ उपलब्ध सम्पर्क ब्यक्तिको नम्बरमा बरोबर फोन गर्नाले हुन्छ । दोश्रो माध्यम भनेको आफूले चिनेजानेका मान्छेहरु मार्फत उनीहरुले काम गर्ने कम्पनीमा जागिर लगाउन भनसुन गर्न अनुनय गर्ने । यी दुई माध्यम मध्ये सबभन्दा सजिलो र उत्तम उपाय भनेको दोश्रो माध्यम नै हो । साथै पछिल्ला केहि वर्षहरूदेखि खाना ओसार्ने सजिला तर पैसा राम्रो प्राप्त हुने कामहरू सजिलै पाइन्छन् । त्यसका लागि Wolt, Foodora, Fiuge जस्ता एप्लिकेशनहरू प्लेस्टोर या एपस्टोरबाट डाउनलोड गरी आफ्नो मोबाइलमा इन्सटल गर्ने र तिनै एपहरूबाट सिधैं कुरियरका लागि कामको आवेदन भर्न सक्ने सजिलो सुविस्ता उपलब्ध छ ।
खानेकुराहरु किनमेलका लागि Lidl धेरैका लागि किनमेल गर्ने आकर्षक सपिङ सेन्टर हो । अन्य ठाउँहरुमा भन्दा यो ठाउँ धेरै नै सस्तोमा सामान पाउने ठाउँ हो । त्यसका अलावा Prisma, K maket, S market, Alepa मापनि मानिसहरु किनमेल गर्न पुग्छन् । नेपाली स्वादका मसला तथा अन्य खानेकुराका लागि केहि नेपालीहरुले हेलसिन्कीको हाकानेमीमा सञ्चालन गरेको पसलमा जाँदा पनि हुन्छ । तर हेलसिन्की वा यसको वरपर बस्नेहरुका लागि बाहेक त्यो उति उपयुक्त गन्तब्य सायदै हो । त्यस्तै कपडा जुत्ता लगायतका लागि सामाग्री किन्न H&M, New Yorkers, लगायतका सपिङ सेन्टरहरुमा मानिसहरु पुग्ने गर्दछन् । तर कम्तिमा पनि फिनल्याण्ड बसाईका शुरूका वर्षहरूका लागि पर्याप्त हुने गरी लत्ता कपडाहरु नेपालबाटै ल्याउनु आर्थिक हिसाबले एउटा सुन्दर उपाय हो ।
त्यस्तै, Frida, Uff जस्ता सेकेन्ड ह्यान्ड पसलमा पनि प्रयोग भैसकेका तर लगाउन योग्य कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन। जहाँ प्रयोग भैसकेका तर प्रयोगयोग्य सामाग्रीहरु बिक्रीका लागि राखिएका हुन्छन । यो पसलमा खानापकाउने भाँडा कुडा, रिकापी, गिलाश, कप, चम्चा, लत्ता कपडा, जुत्ता, सिरक, डसना आदि चिजविजहरु उपलब्ध हुन्छन् ।
पहेंलो रंगको पृष्ठभूमी राखेर लेखिएका जानकारीहरू ११ अगस्ट २०२१ मा अपडेट गरिएको हो ।